आन्दोलनकारीलाई बीपी यादवको अपिल | सहारा टाइम्स
Home » Bichar » आन्दोलनकारीलाई बीपी यादवको अपिल
आन्दोलनकारीलाई बीपी यादवको अपिल
मधेसमा आन्दोलनरत साथीहरू, अब पनि सचेत हुनु होस् । मधेसी पार्टी सरकार ,सदन र सड्कमा छन् । संघीय समाजवादी फोरम नेपालले निकलेको विज्ञप्ति पढनुहोस् के अर्थ लाग्छ ? सम्पुर्ण विज्ञप्ति पढीसकेपछि यो विज्ञप्ति कुनै एउटा राजनितिक दलका नेताले निकाले हो जस्तो लाग्दैन । एउटा कुनै कर्मचारीले निकालेको जस्तो हो जसले बीचको रास्ता निकालेको जस्तो देखिन्छ । संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको एउटा घटक सद्भावना पार्टीले एकजाना माननीय माधवी साहलाई निलम्बन गर्नु भयो किनकि उहाँले राष्ट्रपतिको चुनावमा भाग लिएर काँग्रेसमा मत हाल्नु भयो ।
आश्चर्यको कुरा के छ भने जब संविधानसभाबाट सद्भावना पार्टीले राजिनामाको घोषणा गर्नुभयो । त्यहिबेला उक्त माननीयज्यू राजिनामाको डरले भारतको सितामढी पुगेर केहि दिन आराम गरेर मात्र नेपालको काठमाण्डौ आउनु भयो । त्यो बेला सद्भावना पार्टीबाट उहाँलाई कुनै कारवाही भएन । रमाइलो कुरा त के छ भने सद्भावना पार्टीले राजीनामा दिएर भोट हानु भएकालाई कुनै कारार्वाही भएन तर जो संविधानसभाबाट राजीनामा नै दिएको छैन त्यसलाई कारवाही भयो ।
अब मधेशी मोर्चा पुनः संसदमा जाँदै छन् । एकातर्फ सदनमा भाग लिएको लाई कारवाही गर्ने, अर्काेतर्फ नेपाली काँग्रेसको पछि पछि लागेर सदनमा कुदनका लागि भाग लिने । संघिय समाजवादी फोरमले निकालेको विज्ञप्ति पढनुहोस् । संसदको बैठकलाई औचित्यहिन भनेको छ तर त्यसमा कुन नैतिकताले भाग लिने ? औचित्यहिन भनेको के हो ? औचित्यहिन भनेको त्यो कुनै औचित्य छैन । कुनै काम छैन । खराब छ होइन । यदि औचित्यहिन छ भने त्यतातिर नहेर्नुपर्ने हो । त्यतातिर ध्यान नदिनुपर्ने हो । तर एकातिर औचित्यहिन भने अर्कोतिर त्यसमा भाग पनि लिने यो औतित्य होइन भने के हो ?
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मार्चाको नेतामा बिचलन आएको प्रष्ट देखिन्छन । अर्काे कुरा उहाँहरुमा आत्मबलको कमी त छन् नै । मधेसी पार्टीको यहि रवैया रह्यो भने बाबा पशुपतिनाथले नै जानुन् । सबैमा जय होस् । परिश्रमै नपाउने मजदुरी र सिद्धान्त नभएका राजनीतिक गर्नु कति जायज हो ।